'विद्युतकाे स्वदेशी बजार विस्तार गर्नु पहिलाे आवश्यकता हाे' - UrjaKhabar 'विद्युतकाे स्वदेशी बजार विस्तार गर्नु पहिलाे आवश्यकता हाे' - UrjaKhabar
काठमाडाैं । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब दुई दशक अनुभव संगालेर जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गरेकी हुन्, कविता पोखरेल । उनी अहिले हिमशिला पावर कम्पनीकी अध्यक्ष समेत हुन् । जलविद्युत् व्यवसायमा कमै संलग्न भएका महिलाहरूका लागि पनि पोखरेल प्रेरणा र हौसला पनि हुन् । उनी संलग्न रहेका विभिन्न कम्पनीले करिब सय मेगावाटका आयोजना अगाडि बढाइरहेका छन् । महिला पनि पुरुष समान जिम्मेवारी र नेतृत्व सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्नेमा उनी पूर्ण विश्वस्त छन् । जलविद्युत् विकासमा महिलाको भूमिका, समस्या र समाधानका विषयमा पोखरेलसँग ऊर्जा खबरकी धना ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
ऊर्जा व्यवसायमा कसरी कसरी प्रवेश गर्नुभयो क्षेत्रमा ?
ऊर्जा क्षेत्रमा आउनुअघि मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेँ । करिब २३ वर्ष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा बिताएँ । बैंकमा काम गर्दा गर्दै केही वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न थालेँ । पहिलो पटक २०६० सालमा आफैंले गौरीशंकर विकास बैंकमा व्यावसायिक लगानी गरेकी हुँ । यही बेलादेखि पुँजी बजार, माइक्रो फाइनान्सलगायत क्षेत्रमा पनि लगानी सुरु भयो । लगानी गर्ने तथा मुनाफा कमाउने दायरा बढ्दै गएपछि जलविद्युत्मा अगाडि बढियो । २०७२ सालदेखि यो क्षेत्रमा सक्रिय छु । यो क्षेत्रमा महिलाको संख्या कम छ । यसमा लागेर ऊर्जा उत्पादन गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर मैले लगानी गर्न सुरु गरेकी हुँ ।
यहाँको संलग्नतामा कति वटा आयोजना अगाडि बढिरहेका छन् ?
मेरो संलग्नतामा अघि बढेको पहिलो आयोजना ७ मेगावाटको मेन्चेत खोला हो । यो रुवी भ्याली कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । अनुमतिपत्र लिँदादेखि नै यो आयोजनाको विकासमा म सक्रिय भएर लागेकी छु । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र प्रसारण सम्झौता भइसकेको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र पाउने चरणमा छ । हिमशिला पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने ४.५ मेगावाटको गसेरी खोलामा पनि म संलग्न छु । यसको आइईई स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइबाट वन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
यस्तै, जलशक्ति हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने २५ मेगावाटको इलेप तातोपानी खोला पनि अघि बढेको छ । यसको पिपिए भई लगानी जुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यी ३ आयोजनामा मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता छ । यसका अतिरिक्त सौर्य विद्युत्मा पनि लगानी गर्दैछु । सिन्धुलीमा ५ मेगावाटको सौर्य आयोजना अध्ययन भइसकेको छ । सिर्जनशील ऊर्जा कम्पनीले यस आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेको छ । यसको धेरै काम सकिन्थ्यो तर कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले काम ढिलाई भइरहेको छ ।
महिलालाई ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न कतिको सजिलो छ ?
सजिलो पक्कै पनि छैन । कुनै काम सजिलो हुँदैन । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएका अग्रजहरू र मैले जलविद्युत् आयोजनामा भोग्दै आएको समस्या समान छन् । सबैले भोग्ने समस्या साझा भएकाले महिला भएकै कारण फरक खालको अनुभूति त छैन । आयोजनामा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने यो क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो ।
बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव जलविद्युत्मा कतिको सहयोगी भएको छ ?
बैंकिङ क्षेत्रमा प्राप्त अनुभव जुनसुकै क्षेत्रका लागि काम लाग्छ । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको ज्ञान हुन जरुरी हुुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान हुन जरुरी हुन्छ । र, यसको कार्यान्वयन गर्ने राम्रो टिम चाहिन्छ । यति हुन सके मात्रै जलविद्युत्को सफल निर्माण गर्न सकिन्छ । यसकारण, बैंकिङ अनुभव जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सधैं काम लाग्छ ।
जलविद्युत्मा प्रवर्द्धकले भोग्नुपर्ने समस्या कस्ता छन् ?
यो क्षेत्रमा बिताएका केही वर्षको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा लगानीमैत्री वातावरण नभएको हो कि भन्ने लाग्छ । एकद्वार नीति नहुँदा कानुनी प्रक्रिया धेरै झन्झटिला छन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीले धेरै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको छ । लागत बढेको छ । कतिका अनुमतिपत्रको अवधि सकिएको छ । कतिको नवीकरण गर्ने बेला भएको छ । यी यो क्षेत्रमा देखिएका नयाँ समस्या हुन् । कोरोनाबाट प्रभावित आयोजनाका लागि समय थप गर्ने वातावरण सम्बन्धित निकायबाट बनाइदिनुपर्छ ।
पछिल्लो पटक फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युत्को बजारको कुरालाई लिएर लगानी गर्न नखोजेको अवस्था छ । पिपिए रोकिएकाले बजारको सुनिश्चितता नभएको भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न पछि हटेको यथार्थ हो । सरकारले अनुमतिपत्र बाँड्ने तर पिपिए नगर्ने परिपाटीले प्रवद्र्धकहरू मारमा छन् । अनुमतिपत्र दिइसकेपछि पिपिए पनि समयमै गरिदिनुपर्छ ।
अब यो क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता नारा ल्याएको छ । सरकारी नारालाई हेर्दा भविष्य उज्वल देखिन्छ । विगतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरियो र धेरै आयोजना निर्माण भए । धेरै निर्माणाधीन र निर्माणमा जानेक्रममा छन् । पछिल्लो समय उत्पादित ऊर्जाको बजारको समस्या देखिन्छ । सरकारले अब आन्तरिक र बाह्य बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने समय भएको छ । यसका लागि पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने सम्भावना खोज्नुपर्छ । उत्पादित विद्युत्ले बजार पाएको अवस्थामा यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो देख्छु ।
विद्युत् बजार विस्तार गर्न तत्कालै गर्नुपर्ने काम के के देख्नुहुन्छ ?
विद्युत् बजार व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । जस्तो कि, आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ । देशको व्यापारघाटा कम हुन्छ । यस्तै, विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसरी आन्तरिक खपत बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारी तहबाटै पहल हुनुपर्छ । गत वर्षको ऊर्जा सम्मेलनमा पनि विद्युत बजार व्यवस्थापनको कुरा जोडदार रूपमा उठेको थियो ।
निजी क्षेत्रका समस्या बढिरहँदा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को चुनावी माहोल तातेको छ । यहाँले पनि उमेद्वारी दिनुभएको छ । चुनाव लागेकै हो ?
मलाई चुनाव त्यति लागेको छैन, सामान्य मात्र । भोट माग्न भनेर हिँडेकी छैन । यो पटक इपान निर्वाचन निकै विवादित बन्न पुग्यो । इपान निर्वाचनको विषयलाई लिएर यति धेरै विवाद हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन । खोई किन ? यति धेरै विवादमा तानिँदैछ । यसको जवाफ त अहिलेको कार्यसमितिले नै दिनसक्छ ।
इपानको नयाँ कार्यसमिति कस्तो हुनुपर्छ ?
इपानको कार्यसमिति सशक्त हुनुपर्छ । अबको इपान समावेशी र यो क्षेत्रलाई माथि उठाउने आँट हुनुपर्छ । सबैलाई समेटेर लैजाने हुनुपर्छ । मैले पनि सदस्यमा उमेद्वारी दिएकी छु । भोलि विजयी भएर कार्यसमितिमा आएँ भने यो क्षेत्रका साझा समस्यामा छलफल तथा बहस गरेर सम्बन्धित निकायमा लबिङ गर्न कार्यसमितिलाई सहयोग गर्नेछु । विगतमा सरकारले निजी क्षेत्रका लागि घोषणा गरेका सुविधा (भ्याट फिर्ता र पोष्टेट पिपिए) कार्यान्वयनमा पहल गर्नेछु । महिला भएको नाताले महिलाहरूको सहभागिता बढाउन मैले भूमिका खेल्नेछु ।
इपानमा नयाँ कार्यसमिति नआउँदा निजी क्षेत्रका समस्या ओझेलमा पर्न थालिसके भनिन्छ । यो साँचो हो ?
अहिलेसम्म पुरानै कार्यसमितिले कार्यवहाकको रूपमा काम गरिरहेको छ । समयमा नयाँ कार्यसमिति नआउँदा केही फरक त अवश्य परेको छ । अब पुरानो कार्यसमितिले लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचन गराउनुपर्छ । नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर निकास दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन नै निस्पक्षरूपमा पदाधिकारी चयन गर्ने अन्तिम विकल्प हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा जाऔं र इपान कार्यसमिति चयन गरौं ।